Iboga, onye nwere ikike nwere ikike ime ihe - Afrikhepri Fondation
Fraịdee, Septemba 25, 2020
Iboga, mgbọrọgwụ na ike ime ihe
COsisi a, nke emere ka ọ bụrụ ọgwụ ọjọọ, amachibidoro na France na United States. N’ebe ozo, enyere ikike ime nnyocha na ogwugwu.
N'afọ 1962, otu nwa na-a drugụ ọgwụ ọjọọ, Howard Lotsof, nwara ndị enyi isii ihe ọhụrụ ọ bụla nke otu enyi chemist gwara ya: ibogaine. Na agbanyeghị anya ihe niile mechara, mgbe ọ gbasacharala ọrụ were awa iri atọ na isii, nwa agbọghọ ahụ Amerịka na ndị enyi ya, ndị mmanya riri oke ma ọ bụ cocaine riri ahụ. Ibepu umuaka Howard Lotsof ma nke opekata mpe ọnwa isii, maka oge ha nọrọ na kọntaktị.
Ohere inweta ma ọ bụ nchọpụta buru ibu?
Kemgbe 1980s ruo mgbe ọ nwụrụ na 2010, Howard Lotsof akwụsịbeghị ịgbalị ime ka ndị ọkà mmụta sayensị, ụlọ nyocha, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị obodo na-emeso ndị ọgwụ ọgwụ ọjọọ na ibogaine. A na - enweta ihe ndị a nke alkaloid ezinụlọ site na iboga (Tabernanthe iboga), nke osisi gbara gburugburu rue etiti Equatorial Central. N'ụgbụgbọ mgbọrọgwụ ya nwere ọtụtụ ihe gbara ọkpụrụkpụ iji rụọ ọrụ na ọgwụ ọdịnala na emume mbido Bwiti na Gabon.
“Mgbe m nụrụ banyere ibogaine, enwere m ọchịchọ ịmata ihe na inwe obi abụọ. Ka m nyochakwuo ya, ọ na-adọrọkwu mmasị, ”Stanley Glick, prọfesọ na onye nyocha nyocha na Center for Neuropharmacology na Neurosciences na Albany Medical College na New York. Site na nnwale na oke oke na-adabere na cocaine na morphine, Stanley Glick gosipụtara na 1991 na ibogaine belatara ịchịkwa nke ihe ndị a nanị ụbọchị abụọ ka ọgwụgwọ gasịrị.
Kemgbe ahụ, ọkachasị nyocha ndị America na anụmanụ na ọdịnala ụmụ mmadụ mere ka mmetụta ya pụta. Ibogaine bụ tryptamine, nke dị nso na psilocin na psilocybin (ihe ndị dị na olu hallucinogenic), psychostimulant na hallucinogenic na usoro onunu ogwu. Igwe a na-emekọ ihe na neurotransmitters, ọkachasị serotonin na nri nri, na-egbochi ndị na-anabata opiate. Ọ bụ ihe antagonist NMDA na-anabata (nke glutamate na-eme ka ọ rụọ ọrụ) nke ga-akọwa ihe mgbochi ya.
"Ọ dị mma na iwepụ opioid n'ọtụtụ oge. Patientsfọdụ ndị ọrịa nwere mmetụta na-adịgide adịgide. Mana enwebeghị ọmụmụ ihe gbara okpukpu abụọ, nke dị mkpa iji kọwaa ezigbo ọnụego ihe ịga nke ọma, "Deborah Mash, onye prọfesọ nke akwara neurology na kwayoyin na cell pharmacology na Miami Medical University.
Ọhụrụ ọmụmụ ha akụkụ, pụta ìhè mkpa ọhụrụ Njirimara: iboga ka na-akpali akpali mmetụta na ike metabolism na, dị ka Prọfesọ Dorit Ron Israel, ibogaine akpali njikọ na ntọhapụ nke neurotrophin, nke na-enyere ụzọ na-eme ka ahụ dịghachi mma na ụbụrụ ka ịmegharịa.
Akaebe na-egosi na ọ dị irè: "Ndụ m gbanwere kpamkpam, awa iri na abụọ mgbe m gwọsịrị blanga, ewepụrụ m afọ iri na asaa nke ịṅụ ọgwụ ọjọọ. O doro m anya, enweghị m ike ịkọwa ya, "ka Roberto, 45, bụ onye Italian nke bi na New York na-ekwu, na-eri kwa ụbọchị heroin, cocaine na methadone, dị ọcha ruo afọ asaa. "Akwụpụrụ m afọ atọ nke ịṅụ ọgwụ cocaine na ngwụsị izu na 2004, ebe ọ bụ na anaghị m alaghachi azụ," ka Eric kwuru, afọ French 37. "M wezugara ozugbo. Ọ bụ ezie na enweghi m ihe mgbochi ịghara ịṅụ ọgwụ n'ihi na m dị ọtụtụ grams kwa ụbọchị, "ka Nicolas, bụ onye bụbu onye riri ahụ na cocaine, kwụsịrị ya ruo afọ atọ.
Mana ọdịda na-adị: "Nye m, ọ naghị arụ ọrụ," ka Daniel, bụ onye dabere na heroin, cocaine na "ụdị ọgwụ niile" ruo ihe karịrị afọ 30, na-ekwu. "M na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma kụrụ m ala na methadone, ọgwụ ndị dọkịta na-achọ inye gị dị ka ihe ngwọta ...", ka Daniel, bụ onye were methadodu izu abụọ mgbe e mesịworo ọgwụgwọ, kwuru.
Ọ bụ ezie na a chọpụtalarị taa isi ihe ndị na-eme ka ewu na-agba, ọ bụghị nkọwa zuru ezu nke ọgwụcodynamic arụ ọrụ. Ma nnukwu ihe nkwado ahụ na-ebuli elu ma na-ebuli elu bụ n'ezie nke ihe onwunwe hallucinogenic ha. "Iboga adịghị abanye na ụlọ, ọ dịghị enwe mmetụta nke ọgwụ ọjọọ. Ọ bụghị ihe omume ntụrụndụ, omume ya dị iche iche ma dị mgbagwoju anya karịa nke ọtụtụ n'ime hallucinogens, "ka Yann Guignon, onye na-ahụ maka mgbasa ozi n'etiti intercultural na mmepe na Gabon. Ke adianade do, "ema ama ama ọfiọk ke usụn̄ emi, mbon ukpepn̄kpọ emi mîkwekeke; nke ahụ bụ ya mere, site na mmalite, ndị ọkà mmụta sayensị ejiriwo obi abụọ kweta. Akụkọ ya n'Africa enyewokwa ya ihe omimi nke ndị mmadụ na-ejighị kpọrọ ihe. Ebe ọ bụ na ọ nwere mmetụta hallucinogenic, ndị mmadụ na-eche na ọ gaghị abụ ọgwụgwọ a kwadoro, "ka Glick na-ekwu.
"Iboga bụ akụkụ nke otu, o meghere m nghọta, mee ka uche na ahụ dị ọcha," ka Eric na-agbakwụnye. E wezụga nlekọta ahụike, ọtụtụ ndị àmà na-esi ọnwụ na ọhụụ ha nwere n'oge ọgwụgwọ. Charles Kaplan, onye bụbu onye ntụzizi na Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Mmekọahụ na Rotterdam, na-akọ ha na akụkụ uche psychiatric: "Enwere mmetụta mmetụta uche. Mmetụta ndị a dị nnọọ nso n'ihe psychoanalysts na-akpọ "abreaction". Ha na-echetara ihe ndị na-echefu echefu na ihe ndị na-emetụ n'ahụ banyere ahụike nke nwere ike iso ndị na-agwọ ọrịa rụọ ọrụ. "
Deborah Mash na-akọwa na ibogaine bụ "ngwongwu na-eme ka mmadụ nwee uche, ma ọ bụghị hallucinogen dị ka LSD. Ọ na-eburu nrọ na-ehi ụra ruo awa iri atọ na isii na, n'oge a na-enwe mgbanwe nke mgbanwe, onye ọrịa na-adabere ahụmahụ nke nwata ma chọpụta ihe mgbọrọgwụ ya. "Ọ dị ka ime afọ iri nke psychoanalysis na ụbọchị atọ," ka Howard Lotsof na-ekwukarị.
Usoro nke a, nke a na-enweghị ike ịkọ na nkà mmụta sayensị, na-enye aka n'emepụta egwu na nkwụsị maka ọgwụgwọ iboga ma ọ bụ ọgwụgwọ. N'ihi na Atọm Ribenga, Gabonese omenala agwọ ọrịa, echiche nke "hallucinogen na-ezo aka ọhụụ ma ọ bụ auditions kpamkpam emeghieme ihe, mgbe ọhụụ ndị a na-ekpughe a, ọbụna ma ọ bụrụ na ha bụ ihe atụ, n'ihi na otu onye bụ onye bi na nnabata ya."
A na-agwa ndị ọrịa ka ha kwupụta ahụmịhe ha maka nkwado ọgwụgwọ. "Mgbe ọnwa isii nke ịdị mma gasịrị, enwere m nkụda mmụọ n'ihi na, n'eziokwu, iboga na-agwọ gị ma nye gị ohere ịsị onwe gị:" Ọ dị mma, ị nwere ike ịlaghachi ndụ ma ọ bụrụ n'ịchọrọ "" , ka Roberto kwuru. Dabere na akwụkwọ sayensị na mmekọrịta mmadụ na ibe na iboga, nlọghachi na-emekarị mgbe ọnwa isii gachara ọgwụgwọ, na-esochi enweghị usoro ọgwụgwọ ma ọ bụ n'ihi ọnọdụ mmekọrịta ọha na eze adịghị mma - oge ugboro n'etiti ihe riri ahụ na-akpata. ọnwụnwa ọhụrụ.
Nkewa dị ka ọgwụ ọjọọ eme ihe na United States ebe ọ bụ na 1967, iboga na ibogaine Otú ọ dị, e ikike site National Institute on Drug Abuse (NIDA) ka kenyere dị ka akụkụ nke a ọgwụgwọ protocol on nwoke n'oge mmalite nke 1990. Mgbe nzukọ na Howard Lotsof na ahụrụ anya kwuru mere n'oge ahụ na Research Institute on-eri ahụ na Netherlands na a ụlọ ọgwụ dị na Panama, Deborah Mash, obi abụọ ma na-amasị, e nyere ikike na-eduzi ndị mbụ na-adakarị ọnwụnwa ka USA maka adọ I. Ma 1995, na-esonụ a ngosi site nnọchiteanya nke na-emepụta ọgwụ, NIDA kpebiri ịkwụsị ya ego.
"Echiche nke ụlọ ọrụ ọgwụ na-adịkarị njọ ma nwee mmetụta dị oke mkpa na mkpebi ahụ agaghịzi etinye ego n'ule. NIDA N'ihi ya kwụsịrị ya oru ngo na ibogaine, ma na-aga n'ihu na-akwado preclinical nnyocha na iboga alkaloids, "na-ekwu Kenneth Alper, bụ prọfesọ nke ọrịa uche na neurology na New York Medical University. Kedu ka esi kọwaa nguzogide dị otú ahụ? "Ọtụtụ ụlọ ọrụ ọgwụ na-achọghị ka ha nwee ihe ọ bụla jikọrọ ha na-egbuke egbuke, ma ọ bụ na-agwọ ọrịa ahụ n'ozuzu ha. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ezighị ezi na ha enweghị ike ịba ụba ego n'ịgwọ ahụ riri ahụ. Ọzọkwa, ha na-ekwu na ọ nwere ike ime ka ihe ọjọọ image ha n'ihi na ndị mmadụ katọọ riri na-eche na ọ na-adịghị kwesịrị ka a na-emeso dị ka ọrịa ndị ọzọ, "na-ekwu Stanley Glick.
Ịgwọ ọrịa na ọgwụgwọ abụọ ma ọ bụ abụọ adịghị uru karịa ọgwụgwọ maka ndụ. Ọ bụ ego nzuzo nke Deborah Mash nwere ike ịnọgide na-eme nchọpụta ya, n'agbata ụlọ nyocha ya na Miami na ụlọ ọgwụ na-adịghị mma na agwaetiti St. Christopher na Caribbean.
Taa, mba ụwa dum nwere nkọwa banyere ọnọdụ nyocha na iboga na ibogaine. Ọ bụ ezie na n'ọtụtụ mba enweghị iwu dị, United States, Belgium, Poland, Denmark, Switzerland na, kemgbe 2007, France na-ahuta ọgwụ abụọ a dị ka ọgwụ ọjọọ. Agencylọ ọrụ French maka Ahụike Ahụike nke Arịa Ahụ (Afssaps) kwukwara na iboga nwere “ịmalite n'ime usoro nke ịrọ òtù site na nzukọ ọmụmụ ihe na nkwalite onwe onye” na “njem ime” ” . O kwuru na ihe ọkụkụ ahụ bụ isiokwu nke "nkwalite ike" na ịntanetị.
N'ịmasị ihe ndị ọkà mmụta sayensị na nchebe siri ike, gọọmenti ndị ọzọ amalitela usoro nchọpụta ma ọ bụ ụlọ ọrụ ịgba akwụkwọ na-enye ikike. N'Israel na India, a na-eji usoro nlekọta nke nlekọta ahụike na-eduzi nsogbu ụlọ ọgwụ; na Brazil, Meksiko, Panama na Caribbean, ụlọ ọrụ nlekọta na-elekọta ndị mmadụ; na Slovenia, ụlọ ọrụ nyocha nke multidisciplinary na-arụ ọrụ kemgbe 2005, ebe ọ bụ na 2009, New Zealand nyere ikike ka a na-edepụta akwụkwọ.
Na Gabon, mgbe ọ dịsịrị anya na nzuzo nke ndị malitere, e kwupụtara iboga "ihe nketa nke mba na ebe nchekwa usoro" na 2000. N'ihi na Bernadette Rebienot, onyeisi oche nke Union of Practitioners Health Practitioners in Gabon, "ọgwụgwọ na ibogaine na-ewepu akụkụ mbụ nke iboga, n'ihi ya, anyị abụghị isi iyi. N'ebe ọdịda anyanwụ, ndị nnyocha na-eche na ha maara iboga, mana ha na-eme ka m chịa ọchị ... Anyị maara ya kemgbe mmalite nke oge. Anyị chọrọ mmekorita n'etiti anyị, ọ na-akwado ma ọ bụ maka ọdịmma nke mmadụ ", dọrọ aka ná ntị langanga (" omenala omenala "), bụ onye na-akwado Òtù Ahụ Ike Ụwa (WHO) maka ịmara ọgwụcopoeia omenala.
Na Slovenia, "ndị Institute maka anthropological Medicine [Imo] aspires iji weghachi àgwà na aha nke ọdịnala na-agwọ ọrịa na eke ịgba akwụkwọ site na nkà mmụta sayensị na nwale nke a ụzọ, ịdị irè ha na ha na nchekwa" akọwa Roman Paskulin, ọkachamara n'ihe banyere ọgwụ ahụ na onye ndu nke IMO. Anyị na-enye ndụmọdụ anyị maka ịbelata ohere nke ọgwụgwọ gọọmenti, mana adịghị enye nlekọta n'oge a. "Ihe mgbaru ọsọ bụ ịzụlite a mbara obibia ahụ ike ya n'ụzọ anụ ahụ, uche na-elekọta mmadụ na ahụ ike, na-eweta ọnụ ọgwụ mahadum, Humanities na biotechnology, na nkwado si Ministry of Health na Agency ọgwụ ọjọọ.
Kedu ihe na-aga nke ọma nke ọgwụgwọ a? Taa, ọ dịghị onye nchọpụta na-aga n'ihu na-ajụ ajụjụ ọnụ ọgụgụ, ma e wezụga ịsị na ọgwụgwọ a yiri otu n'ime ihe kachasị mma megide ọgwụ ọjọọ. Naanị atụmatụ ezighi ezi na-ekesa. Ntak-a? Nke mbu, n'ihi na enweghi usoro omumu sayensi na ogologo oge, nke abuo n'ihi na a na-eme ihe ka ukwuu n'ime ọgwụgwọ na ọnọdụ na-ezighi ezi. Ọganihu ọgwụgwọ nke iboga ma ọ bụ ibogaine bụ nke mbụ bụ ihe na-egosi mmetụta siri ike na ịgba akaebe na sayensị enwebeghị ike ịtụle n'ihi enweghị ego na ego na ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Kemgbe afọ 1960, na United States, mgbe ahụ, na Europe na ụwa, netwọk nke nlekọta ọzọ ejirila na-emepe iwu na-akwadoghị n'ihi na a mataghị ibogaine: ndị ọrịa na-emeso ya na Gabon, site na netwọk nkịtị na N'ebe ọdịda anyanwụ, n'ebe a na-agwọ ọrịa na Latin America ...
A na-elekọta nlekọta ndị a gburugburu ndị na-ekpuchi iboga ("ndị na-enye ndị na-ekpuchi oghere"), ndị na-agwọ ọrịa na-ekwupụtaghị na ha, n'ihi na ọtụtụ akụkụ, enweghị ọzụzụ ọzụzụ ahụike. Enweghị data dị na ndị a, ole na ole bụkwa ndị na-agba akaebe. Na New York, otu n'ime ha, bụ Dimitri, na-ewere ọrụ ya na ndị na-akwado ya ka ha mara maka iboga ibo. Ndi heroin na cocaine bu ihe di ka afo iri abuo gara aga, wepuru ya ekele nye iboga, Dimitri zoro aka na Gabon ya na ndi ogwu ojoo. N'amaghị ama nke ime ụlọ nkwari akụ ndị dị mfe, ọ na-emegharị ememe Bwiti na ememe, egwu na ekpere iji nye akụkụ ime mmụọ. "Ọtụtụ ndị na-enye ndị na-enye ndị omeiwu na-atụgharị, n'ihi na ị gaghị emeli ihe ndị a ma chee na ihe nile ga-adị mma. Bwiti chọrọ ntinye, ọrụ na, ọ bụrụ na o kwere mee, ndụ dị mma, "ka ọ na-ekwu. Otú ọ dị, na ụdị nlekọta ahụ, ihe ize ndụ dị na ụfọdụ ndị na-agwọ ọrịa na enweghi nlekọta ahụike.
N'ihi ya, ọgwụgwọ ahụ enweghị ihe ize ndụ: ebe ọ bụ na mmalite nke afọ 1990 enwewo ọtụtụ ọnwụ mberede. Dị ka Deborah Mash si kwuo, "ọnwụ nile mere na ntọala ndị dị elu." The egbu abụkarị na ọrịa na ọrịa obi na ọrịa ma ọ bụ n'ihi nke a ọgwụ e ọnụ iboga, na-enweghị ihe ọmụma nke na-agwọ ọrịa mgbe ụfọdụ akpachapụghị anya. "Na kọrọ ikpe, ọ bụ ike ma ọ bụ gaghị ekwe omume na-ekwu na-akpata ọnwụ ka ibogaine, na nke a bụ ọzọ ihe mgbochi na nchọpụta ọhụrụ" na-ekwu Stanley Glick. Ọ bụrụ na autopsies n'ezie mgbe owụt egbu ọrụ nke iboga, maka Prọfesọ Jean-Noel Gassita, Gabon ọgwụ onye na-amụ a stof maka afọ iri ise, ọgwụgwọ bụ cons-gosiri n'ihi na obi dị ka ewere osisi na-eme ka ụda nke obi dị elu.
Ajuju ajuju nke mejuputara iboga bu isiokwu nke ihe omumu sayensi; naanị otu hụrụ ọgwụ ọjọọ na-egbu egbu, mana na usoro ọgwụgwọ dị oke elu nke na enweghị ike inye ya onye ọrịa ahụ. "E boro Iboga ebubo ịbụ ihe dị ize ndụ mgbe ọ na-egbu ihe na-erughị aspirin," Laurence Gassita, onye na-ere ọgwụ, onye nkuzi na Ngalaba Nkà Ọgwụ na Libreville, Gabon kwuru.
Jean-Noël Gassita kwuru, "Ọ bụ osisi ọrụ ebube, nke a na-enwetụbeghị ụdị ya, ọ bụrụgodị na ọ bụ osisi na-akpata esemokwu. Esemokwu dị ukwuu maka Stanley Glick, onye na-ahọrọ ugbu a ịrụ ọrụ na molecule 18-methoxycoronaridine (18-MC), dị nso na ibogaine na enweghị mmetụta hallucinogenic. "Ekwere m na ibogaine ga-anọgide na-emebi iwu na United States, mana enwere m olile anya na 18-MC ga-abụ otu ụbọchị ọgwụ akwadoro," onye nyocha ahụ kwuru, ka na-eche ọnwụnwa nke ụlọ ọgwụ.
Deborah Mash gbasoro otu usoro ahụ site na ịmepụta ụdị ọzọ nke ibogaine, noribogaine. Na Gabon, Bernadette Rebienot nwere mmasị ikwu na nyocha a dị anya site na iji ilu Africa: “Anyị nwere ike ịbụ abụ kachasị mma, mana anyị enweghị ike gafere onye dere ya. Lezie anya na ndetu na-ezighi ezi… ”
Sabah Rahmani maka World
Atiya AHUIKE NA MEDICINE
Mmalite na nnabata nke mmụọ - René Guénon (PDF)
Favela nke nwanyi. Ịchọta ịchọta ihe
Kedu otu esi akwadebe ụda afọ atọ?